Nhungamiro PaMaware - Zvazviri uye Zvazvinoita
WhatsApp Inokunda Facebook sePamusoro Social Messaging App, Inoti Nyowani...
Chii chinonzi Malware, uye Ungadzivisa Sei Kuva ...
Chii chinonzi Malware, uye Unogona Sei Kudzivirira Kuva Musungwa?
Iwe unogona kunge wakambosangana nezwi rekuti malware pamberi asi pamwe hauna kumbofunga zvakanyanya. Chero bedzi paine chirongwa cheantivirus chakaiswa pakombuta yako, nei uchifanira kunetseka nezve malware? Chokwadi ndechekuti kurwiswa nemarware kuri kuwedzera. Nyanzvi dzinotarisira zvishoma 1348.37 mamiriyoni mafomu ye malware by 2022. Kunyange chiri chokwadi kuti ava vanorwisa vanowanzotarisa makambani, iwe uchiri kuda kuziva kuti chii chinonzi malware kuitira kuti iwe ugone kuzvidzivirira iwe nguva dzose, iwe uri kumba kana kuhofisi.
Tichitarisa zvakadzama nezve malware, isu tichatarisawo nzira dzevashandisi vanogona kuzvidzivirira kubva mukurwiswa uku. Somuenzaniso, unogona kutenga HTTP proxy, chirongwa cheantivirus chine simba uye chengetedza kuchengetedza kwakachengeteka kuti utange kuzvidzivirira.
Muchinyorwa chino nezve malware, tichave tichivhara zvinotevera misoro:
Chii chinonzi malware?
Ko malware inopararira sei?
Ndeipi kukuvara kunogona kuitwa nemalware?
Nzira yekudzivirira sei komputa yako kubva kune malware?
Malware iamburera izwi rekutsanangura zvirongwa zvesoftware zvakagadzirirwa kuzvimisikidza pachivande pamakomputa uye kukonzera mhirizhonga dzakasiyana siyana. Malware anga aripo kwenguva yakareba sekunge internet uye pamwe nekuvandudzwa kwetekinoroji, software yakaipa (malware) yave yakanyanya kuoma. Nepo kurwiswa kwagara kuine hutsinye, kwave kuita mari yakawanda kune vapari vemhosva, izvo zvakonzera kuwedzera kwekurwiswa kwemalware.
Zvino ngatitarisei aya mafomu mashanu epamusoro emalware mune zvakadzama.
Kufanana nehutachiona hwehutachiona, rudzi urwu rwemalware runopararira nekuzvidzokorora. Kana imwe mudziyo yave nehutachiona, iyi inogona kuva kombiyuta, USB, kunze hard drive, etc. Kana iwe ukabatanidza imwe mudziyo, ichavawo nehutachiona uye inobatsira kuparadzira purogiramu yakaipa.
Trojans inotaridzika semapurogiramu chaiwo, izvo zvinoita kuti zvive zvakanyanya. Nekuti ivo vanoita sezvirongwa chaizvo, vanoiswa pamidziyo uye vobva vatora data rakavanzika, kukopa mafaera uye kunyange kudzima data. Trojans ndeimwe yeanonyanya kuwanikwa malware.
Makonye anonyanya kunanga data mukufambiswa, saka iri kutumirwa. Makonye mapurogiramu akazvimirira anogona kufamba pakati pemasystem ari ega, uye haadi kutapurira mudziyo, senge hutachiona, kupararira kana kuwanda.
ransomware ndeimwe yeakanyanya kukuvadza mari mafomu emarware kunze uko. Munguva yekurwiswa kwerudzikinuro, komputa yemunhu akabatwa, data uye masisitimu anogona kubatwa rudzikinuro kudzamara munhu akabatwa abhadhara ari kurova. Kurwiswa kwerudzi urwu kunogona kuita kuti bhizinesi rimire zvachose, sezvo munhu anenge abatwa anenge asingakwanise kushandisa komputa, data kana masisitimu ari kubatwa senhapwa kudzamara zvaitwa.
Kunze kweizvi, mamwe marudzi emarware nemhando nyowani anowedzerwa nguva dzese. Heano mamwe mashoma mamwe marudzi emalware aungasangana nawo:
Rogue kuchengetedza software
Malware Inopararira Sei?
Cybercriminals vari kuramba vachishanda munzira nyowani dzekuparadzira software yakaipa uye kubata vanhu vazhinji nemabhizinesi sezvinobvira.
Dzimwe dzenzira dzinogona kuparadzira malware dzinosanganisira:
Midziyo yakabatana kunetiweki yenharaunda
Kutumira meseji nekukurumidza uye kugovera mafaera network
Ndeipi Kukuvadza Kunogona Kuitwa NeMalware?
Maitiro eMalware pakombuta yako, network kana masisitimu anosiyana zvakanyanya zvichienderana nekutyisidzira kwega kwega. Mamwe mavhairasi anozodzikamisa komputa yako zvakanyanya, nepo chimwe chinhu senge ransomware chinogona kukurambidza zvachose kuwana data rako.
Malware anogona kukonzera kukuvadza kukuru kune Hardware yekombuta yako kana mudziyo. Mamwe mavhairasi anogona kudzima data mubios, zvichiita kuti komputa yako imire kushanda. Mamwe matrojan anogonawo kuvhura nekuvhara CD/DVD ROM yako kana zvirongwa zviri pamudziyo wako izvo zvinozopedzisira zvakonzera kutadza kwehurongwa kana mudziyo.
Malware anogona zvakare kutungamira mukurasikirwa nedata uye kuba. Data chinhu chakakosha uye chinogona kutengeswa nyore. Matsotsi mazhinji anoshandisa malware kupinza bhizinesi system kana network uye anogona kuba chero yakakosha data inogona kutengeswa pawebhu rima. Iyo data inoshanda zvakanyanya kune iyi ndeyemutengi uye mamwe ega ega, kureva zita, surname, nhamba yeID, ruzivo rwekuchengetedzwa kwevanhu, ruzivo rwezvekurapa, etc. Keyloggers, semuenzaniso, gara nekushivirira pakombuta yako uye urekodha makiyi ako ese. Aya anoshandiswa kuunganidza ruzivo rwekupinda uye zvitupa zvinogona kushandiswa neanorwisa kuwana maakaundi ako. Ransomware inogona zvakare kutungamira mukurasikirwa nedata sezvo data rako richichengetwa kusvika rudzikinuro rwabhadharwa, uye kunyangwe zvakadaro, hazviite kuti udzose iyo data.
Pane nzira shoma dzakasiyana dzaunogona kudzivirira komputa yako. Kana zvasvika pakudzivirira kubva kune izwi rakafara semarware, zvakanakisa kushandisa nzira yakasanganiswa. Kutanga, ita shuwa kuti une simba uye yakavimbika antivirus chirongwa yakaiswa. Zvadaro, iwe unofanirwa kutenga proxy yeHTTP iyo inochengetedza yako online connection uye kukudzivirira nekuvhara IP yako kero, zvichiita kuti zvive zvakaoma kubirwa. Zvakare, ita shuwa kuti unomisikidza yako antivirus kuti utarise zvishandiso zvako nguva nenguva. Tevere, ita shuwa kuti unochengeta yako yekushandisa system, software, maapplication uye browser kusvika parizvino. Kuve nemapurogiramu echinyakare anovhura system yako kuti irwise sezvo izvi zvine kusasimba. Chekupedzisira, gadzira ma backups akachengeteka aunogona kushandisa kudzoreredza system yako mushure mekurwiswa.
Malware ishoko rakatambanuka kwazvo rinobatanidza akawanda akasiyana siyana software yakaipa iyo inogona kushandiswa kugadzira marudzi ese emhirizhonga. Sezvo mari ichizoitwa nekutengesa data kana kuibata rudzikinuro, kurwiswa uku kunoramba kuchikwira. Kuti uzvidzivirire zvine mutsindo, unozofanirwa kutenga HTTP proxy uye yakasimba antivirus chirongwa, gara uchigadzira backups, uye ive nechokwadi chekuti zvirongwa zvese zviri kuenderana.